ဘေဘီလေးကို လက်ဖက်သုပ်ကျွေးလို့ရလား................ - Hello Sayarwon
အသီးမှာ သရက်၊ အသားမှာ ဝက်၊ အရွက်မှာ လက်ဖက်ဆိုတဲ့ စာဆိုလေးအတိုင်း အရွက်တွေထဲမှာ လက်ဖက်က တော်တော်လေး အရသာရှိတယ်နော်။ နေ့ခင်းနေ့လယ် အဆာပြေ အနေနဲ့ သုပ်စားစား၊ ထမင်းပူပူလေးနဲ့ပဲ တွဲစားစား စားလို့ကောင်းပြီး ခံတွင်းမြိန်စေတဲ့ လက်ဖက်က ဘေဘီလေးတွေကိုရော ကျွေးလို့ ရမလား။
ဘေဘီလေးတွေက လက်ဖက်စားတဲ့အခါ နည်းနည်းဆိုပြီး လာတောင်းလို့ ခွံ့ချင်တယ်ဆိုရင် မခွံ့ခင် ဒီဆောင်းပါးလေးကို အရင်ဖတ်ကြည့်လိုက်နော်။
ဘေဘီလေးကို လက်ဖက်သုပ်ကျွေးလို့ ရမလား…………
ဘေဘီလေးက တစ်နှစ်ကျော်ပြီ အစားလေးလည်း တော်တော်များများ စားတတ်ပြီ။ တီတီတွေ၊ ဖွားဖွားတွေ လက်ဖက်စားတဲ့အခါ အနားရောက်လာပြီး နည်းနည်းဆိုပြီး ပါးစပ်လေးဟတဲ့အခါ ခွံ့မိချင်မှာပါ။ ချစ်တာကိုး။
ဒါပေမယ့် ဘေဘီလေးကို လက်ဖက် မခွံ့ဖို့ ပြောပါရစေ။ လက်ဖက်က စားကောင်းတာ မှန်ပေမယ့် နုနယ်သေးတဲ့ ဘေဘီလေးတွေအတွက်တော့ မသင့်တော်ပါဘူး။
ဘေဘီလေးကို လက်ဖက်ကျွေးချင်တယ်ဆိုရင် အနည်းဆုံး အသက် ၈ နှစ်လောက်မှ နည်းနည်းချင်းပဲ စကျွေးသင့်ပါတယ်။
ဘေဘီလေးကို လက်ဖက်ကျွေးရင် ဘာတွေ ဖြစ်လာနိုင်လဲ…………
လက်ဖက်မှာပါတဲ့ ကဖင်းက ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ တစ်ရှူးတွေ အားလုံးဆီ ရောက်သွားပြီး သွေးပေါင်ချိန်ကို တက်စေတာ၊ နှလုံးခုန်မြန်တာမျိုးတွေ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး လက်ဖက်မှာပါတဲ့ ကဖင်းက ခန္ဓာကိုယ် အပူချိန်ကို ပြောင်းစေပြီး အစာခြေရည်ကိုလည်း ပြောင်းလဲစေပါတယ်။
လက်ဖက်စားရင် စိတ်ဓာတ်ကြွမှုကို ခံစားရနိုင်ပေမယ့် ရေရှည်မှာ စိတ်ဓာတ်ကျတာ၊ စိုးရိမ်စိတ်များတာတွေကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဘေဘီလေးရဲ့ အာရုံ စူးစိုက်နိုင်မှုကိုလည်း ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
လက်ဖက်စားရင် အိပ်မပျော်တာက လူကြီးတွေမှာမှ ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ကလေးတွေမှာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လက်ဖက်က နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်ဖို့ ခက်စေပါတယ်။
ဦးနှောက် ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ထိခိုက်စေမယ်။
လက်ဖက်က ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ သံဓာတ်စုပ်ယူမှုကို အဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့ အရှိန်ယူနေတဲ့ ကလေး တစ်ယောက်အနေနဲ့ သံဓာတ်မပြည့်ဝတာက အာရုံစူးစိုက်မှု အားနည်းသလို ဦးနှောက်နဲ့ ဉာဏ်ရည် ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
ဘေဘီလေး အများစုဟာ သံဓာတ် ချို့တဲ့မှုကြောင့် သွေးအားနည်းရောဂါကို ခံစားကြရပါတယ်။ လက်ဖက်က အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလို သံဓာတ် စုပ်ယူမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့် ဘေဘီလေးကို သွေးအားနည်းရောဂါ ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။
လက်ဖက်က အစာစားချင်စိတ်ကို ဖြစ်စေနိုင်သလို အစားမစားချင်တာမျိုးလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကဖင်းက ကြီးထွားဖို့ အရှိန်ယူနေတဲ့ ဘေဘီလေးရဲ့ အာဟာရတွေကို ရယူမှုကို အဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်သလို အရိုးတွေ သန်မာစေဖို့ လိုအပ်တဲ့ ကယ်လ်ဆီယမ် စုပ်ယူမှုကိုလည်း အဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
လက်ဖက်စားတာက ဘေဘီလေးရဲ့ ဝမ်းဗိုက်လေးကို မအီမသာဖြစ်စေပြီး လေထိုးလေအောင့်တာတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် လက်ဖက်က စားကောင်းတယ်ဆိုရင်တောင် ဘေဘီလေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တာတွေ များတာကြောင့် မကျွေးဖို့ ပြောပါရစေ။
5 Experts Answer: Is Caffeine Bad for Kids? https://www.livescience.com/36164-caffeine-bad-kids.html Accessed Date 25 November 2020
What Is Caffeine? https://kidshealth.org/en/parents/child-caffeine.html Accessed Date 25 November 2020